Fiovana eo amin’ny fitarihana ny Lingua Paortiogey sy Frantsay! · Global Voices teny Malagasy
Horakora-pifaliana ho an'i Suzanne sy i Melina!
Voadika ny 18 Jolay 2019 6:01 GMT
Miarahaba ny rehetra! Vao haingana, niala amin'ny maha-mpitantana ny fandikan-teny Lingua Frantsay sy Paortiogey azy araka izay filaharany izay i Suzanne Lehn sy i Melina Coelho, fa hifantoka bebe kokoa amin'ny tetikasan-dry zareo tsirairay avy. Mpitarika samy nahatalanjona tokoa i Suzanne sy i Melina ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo, ary heni-boninahitra aho niasa niaraka tamin-dry zareo. Isaorako indrindra ry zareo tamin'ny fandraisana nataon-dry zareo ho an'ny Lingua.
Amin'izao fotoana izao ny Lingua frantsay dia tantanin'i Gwenaëlle Lefeuvre na Gwen raha afohezina. Fizisiana kitin-draha i Gwen, mpankamamy fiteny. Zohio Twitter izy ao amin'ny @DiffractedWord sy ny @AcademieDuGallo, fikambanana niarahany'i Gwen tamin'olon-kafa nanorina ho famelomana aina ny Gallo, fiteny Romance an'i Britaina. Nihalehibe tao Frantsa i Gwen, nonina tany Fanjakana NY, ary manori-ponenana ao amoron-dranomasina anglisy amin'izao fotoana izao.
Miaraka amin'i Esther Dodo, no itantanan'i Luiza Saturnino Braga ny Lingua Paortiogey. Teraka tany Rio de Janeiro i Luiza ary nianatra tany Brezila hatramin'ny nahasoany ny diplaoma Bachelor amin'ny fanabeazana ka manana fahaizana manokana amin'ny teknolojia avy amin'ny PUC – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nonina tany Danemarka nandritra ny roa taona izy ary niverina tany Brezila indray ary nanao asa isan-karazany mandra-pahazoany ny mari-pahaizana fandikanteny avy amin'ny Associação Alumni tao São Paulo tamin'ny taona 2004. Hatramin'ny taona 1997 i Luiza no niasa amin'ny maha-mpandika teny azy, matetika manao dikantsoratra ho an'ireo orinas alehibe sy mandika antsoratra na manao fanitsiana tranonkala, dosie na lahatsoratra amin'ny ankapobeny. Vao haingana izy izao no nahadika soratra boky anankitelo!
Raha tsy mbola tafahoana tamin'i Melina aho, ilaiko kosa ny manome voninahitra manokana an'i Suzanne. Sivy taona lasa izay no nihaonanay voalohany, tany amin'ny vovonana tao Santiago tany Shily. Nahafinaritra ny dia, na tamin'ireo vovonana na ireo dia niaraha-natao tato amin'ny GV nandritra ny taona maro. Nijery ny hakanton'ny tranonkala sy ny vondrom-piarahamonina teo ambany fitarihan'i Claire sy i Suzanne. Renin'ny GV Français!
Ny ekipa Lingua nandritra ny vovonana tany Santiago, tany Shily, taona 2010
Soava dia, ry Suzanne sy ry Melina, any amin'ny tontolonareo vaovao any, ary faly aho fa mbola mitoetra ho mpikamban'ny vondrom-piarahamonina ianareo. Manantena ny handre avy aminareo hatrany.